Soo dejisan Windows Repair 4.9 Standard... – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & WaxyeelayntaWindows Repair
Qeybta: Nadiifinta & Waxyeelaynta
Bogga rasmiga ah: Windows Repair
Windows Repair – software ah in la saxo qaladka iyo kabsado ku soo koobin ee nidaamka qalliinka on default. Muuqaaladan weyn ee Windows Repair yihiin awood u leh inay soo celiyaan rukhsadda file, xaliyo khaladaad diiwaanka, casriyayso nidaamka qalliinka, la shaqeeya brannmur software iwm software waxa ku jira hababka kala duwan ee dib u soo kabashada, kaas oo tiraan user ka baahida loo qabo in dib nidaamka. Windows Repair waxay leedahay interface ah dareen leh oo si sahlan loo isticmaali.
Recovery ee awoodda shaqeeya nidaamka
Kaabidda Error ee diiwaanka iyo nidaamka kharribeen files
Soo saarida xayiraad ku rakibtay fayrusyada
Abuuraa nidaam soo celin barta
Soo dejisan Windows Repair
Qalabka Tweaker Advanced – software si loo hagaajiyo waxqabadka kombiyuutarkaaga. Softiweerku wuxuu ka kooban yahay qalab farabadan oo lagu dardar galiyo laguna hagaajiyo nidaamka.
Faallo ku saabsan Windows Repair
Windows Repair Xirfadaha la xiriira
Nadiifin Master ah – waa barnaamij lagu nadiifiyo nidaamka faylasha haraaga ah iyo kan ku meelgaarka ah. Sidoo kale, softiweerku wuxuu awood u siinayaa inuu tirtiro plugins-yada kala duwan iyo codsiyada.
Auslogics Disk Defrag – waa aalad ku habboon in lagu kobciyo laguna hagaajiyo xasilloonida nidaamka. Softiweerku wuxuu kuu oggol yahay inuu khafiifiyo diskiga adag isla markaana abaabulo feylasha.
Tani waa software si loo helo xogta noocyo kala duwan oo ay sabab u yihiin xayiraadda shilalka, weerarka fayraska ama dhaawaca maqalka.
CleanMem – softiweer waxaa loogu talagalay in lagu nadiifiyo kumbuyuutarka RAM kumbuyuutarka oo loo arko macluumaadka ku saabsan heerka RAM waqtiga-dhabta ah.
Nidaamku wuxuu leeyahay dhammaan hababka lagama maarmaanka u ah in aad ka ilaaliso kambiyuutarka ka horjoogsanaya hanjabaadyada iyo taageeraya goobaha horumarsan ee hababka amniga.